Pirezidaantiin aangoo gadhiise; gaafatamaan miidiyaa aangoo irraa kaafame.n
Date: February 18, 2014Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 18 Guraandhala 2014) Pirezidaantiin Mootummaan Oromiyaa Ob Alamaayyoo Atoomsaa sababa ” dhukkubaan” aangoo gadhiise.
Ibsi Waajjira Dhaabbata Dimokiraasummaa Ummata Oromoo irraa bahe akka ibsutti, Ob Alamaayyoon aangoo kan gadhiise sababa fayyaatiin hojii gaggeessuu waan dadhabeef.
Akka ibsa kanaatti, Ob Alamaayyoon iyyannaa aangoo duta taa’ummaa dhaabaa fi pirezidaantummaa mootummaa gaadhiisuu waan galfateef, gaaffichi Koree hojiraawwachiiftuuf dhiyaatee guutummaatti fudhatameera.
Simbirtuun maddeen isaa amanamoo wabeeffachuun akak gabaasetti, aangoo irraa gadhiisuun Ob Alamaayyoo dhukkuba sababa haa godhatu malee, hundeen isaa “dhiibbaa TPLF irraa dhufee dha” jedha.
Akka gabaasaa Smbirtuutti, walgahiin hatattamaa “akkuma FDG qeerrootiin guutummaa Oromiyaa keessatti labsameen gaafa Guraandhala 14, bara 2014 obbo Alamaayyoo fi warri tikaa dhimmicharratti Adaamaatti mariif wal-gahanii ture. Wal-gahii sanaa akka bahaniin obbo Akamaayyoon waraqaaa aangoo gadhiisuus galfatani.”
Akka Heera Mootumama naannoo Oromiyaatti, yoo pirezidaantiin hin jiraanne pirezidaantiin ittaanaa bakka bu’ee hojjata.
Haaluma walfakkaatuu, gaafatamaan Dhaabata Raadiyoo fi Televizynii Oromiyaa, Ob Masfin Darajjee aangoo irraa kaafamuun ibsame.
Ob Masfin Darajjee sababa aangoo irraa itti kaafame ifatti hin beekame. Bakak isaa immoo itti gaafatamaa dhimma nageenya Oromiyaa kan ture, Ob Tamasgeen Baay’isaa akka buufame beekameera.
Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa roga garaa garaa keessatti fincilli diddaa garbummaa babal’ataa jira. Akka Raadiyoon Sagalee Oromoo tamsaasa isaa Guraandhal 17, 2014 keessatti gabaasetti, FDG Oromiyaa keessatti itti fufee jira.
Mootummaan Itophiyaa immoo fincila kanaan duuba namoota jiran jedhee shakku mara adamsee hidhuutti akka Qeerroon gabaasee jira.
Previous Previous post: Obbo Baqqalaa Nadhii waggaa 80tti addunyaa kanarraa boqotan.
Next Next post: Yaadannoo Mararsiiffannaa Obbo Baqalaa Nadhii: